Soo iibso testosterone Buuxi budada ugu weyn AASraw
/blog/testosterone Enanthate/Soo iibso testosterone Biyo badan ku dhalaal
Posted on 01 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray testosterone Enanthate. Waxay leedahay 12 Comments.
Maxay tahay imtixaanka tijaabada?
testosterone Enanthate waa mid ka mid ah tijaabooyinka ugu badan ee loo isticmaalo daaweynta tijaabada hoose ee testosterone. Sidoo kale waa mid aad loo jecel yahay goobaha kor u qaadista waxqabadka. Tani waa mid ka mid ah sambabada ugu macquulsan ee sambabada ee suuqa, waa cufnaan aad u sarreeya, oo u dulqaatay badi ragga waaweyn oo dhan iyo sahayduna waxay ka soo galaan saqafka.
Testosterone Enanthate waa steroid anabolic kaasoo ku habboon heerarka isticmaalka. Tani waa steroid aad u fiican oo loogu talagalay isticmaalka steroid marka ugu horeysa oo si isku mid ah u shaqeynaya shakhsiyaadka leh waqti badan oo ka mid ah ilmagaleenka. Waxay ku qaadi doontaa waxyeelo la taaban karo, laakiin waxaan sidoo kale arki doonaa inay aad u fududahay in la xakameeyo. Haddii tani ay tahay mid la yaab leh waa in aysan noqonin. Dhamaantiis, inkastoo ay synthetic tahay fudud testosterone, hormoon jidhka bini'aadamka ma aha oo kaliya si fiican u caadada ah laakiin mid ka mid ah muhiim u ah caafimaadka iyo ladnaanta.
waa maxay Testosterone Enanthate budada?
Magaca: Testosterone Enanthate
Nooca Molecular: C21H28O3
Miisaankani waa: 400.59
Dhibcaha Dhibcaha: 34-39 ℃
Xajinta Kaydinta: 2-8 ℃
Color: budada crystalline cad
Testosterone Enanthate Cycles iyo Isticmaal
Tijaabada Horumarinta Ciriirigga badanaa waa mid ka mid ah qashinka ama xajmiga, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa hab gaar ah ee jarista ama wareegyada dufanka. Si aad u hesho miisaan ama baaritaan, Testosterone Enanthate waxaa badanaa lagu shaqeeyaa qiyaas ka sarreeya (badanaa ugu yaraan 500mg wiigiiba usbuucii), sababtoo ah waa cirbado anabolic oo leh dherer dherer ah, taasina waxay muujineysaa nolol badhkeed 7 - 10 maalmood, oo sidaas darteed tijaabooyinka loo yaqaan 'Enantite Entry Theaters' ayaa inta badan soconaya muddooyinka saacadaha 10 - 12 ama ka dheer.
Labada dillaacyada iyo jarista wareegyada, Testosterone Enanthate waxaa badanaa lagu dhejiyaa dabeecado kale oo dabiici ah kaas oo sahlaya yoolka ugu dambeeya ee isticmaalka (kicinta, culeyska, ama dufanka). Tusaale ahaan, testosterone Enanthate wareegyada loogu talagalay ujeedada qulqulka badanaa waxaa ka mid ah isticmaalka Deca-Durabolin (Nandrolone Decanoate) iyo / ama Dianabol (Methandrostenolone), halkaas oo Dianabol caadi ahaan u ordo toddobaadka ugu horeeya ee 6 sida dhisme bilaabay.
Marka ay dhacdo in tijaabada Baaritaanka Enanthate wareegyada waa goynta ama wareegyada dufanka, Testosterone Enanthate badanaa waxay ku socotaa TRT (Tijaabada Bedosterone Therapy) qiyaastii 100mg toddobaadkii halka xeryaha kale ee la door bidayo jarista iyo luminta loola jeedo muddada wareegga . Isticmaalka Testosterone Enanthate qiyaastaan ​​ayaa kaliya si loo ilaaliyo hawlaha jidhka caadiga ah halkii ay ka dhigi lahaayeen xoojinta guulaha iyo horumarinta waxqabadka.
Qiyaasta Testosterone Horumarinta budada:
Si loo daaweeyo testosterone hooseeya, tijaabooyinka caadiga ah ee Testosterone Enanthate ayaa ku dhici doona 100-200mg maalin walba xannaanada 7-10. Si kastaba ha noqotee, dhakhaatiirta qaar ayaa kala qaybin doona wadarta qiyaasta daaweynta iyo shan maalmood oo kasta. In badanaa caan ku ah Maraykanka ayaa dhakhtarrada qaarkood soo qori doona qiyaaso ah 200-400mg toddobaad kasta oo 2-3 iyo mararka qaarkood toddobaad kasta 4. Tani waa wax aan fiicneyn, laakiin tababar ayaa qaar ka mid ah raacaya. Wadarta muddada daaweynta waxay noqon doontaa mid aan qarsoodi lahayn. Inta badan ragga u baahan daaweynta testosterone oo hooseeya waxay u baahan tahay nolol. Tani waxay noqon kartaa mid cidhiidhi gal ah laakiin is weydii su'aal muhiim ah; Miyaad ka xumaan lahayd tijaabin hooseeya ama daaweyn?
Goobta horumarinta waxqabadka, qiyaasaha tijaabada ah ee Testosterone Enanthate ayaa ku dhici doona 200-500mg toddobaadkii. 200-250mg isbuucii waa wax caadi ah haddii hormoonka loo isticmaalo kaliya in lagula dagaallamo dabeecada dabiiciga ah ee loo yaqaan 'testosterone natural' sababtoo ah isticmaalka steroids kale. Wixii saameyn dhab ah ee anabolic, ragga intooda badan waxay heli doonaan 400-500mg wiigiiba usbuuc si ay u noqdaan kuwo aad waxtar u leh oo aad u sahlan in la xakameeyo. Qiyaasaha noocan ah sida caadiga ah waxaa loo kala qaybin doonaa laba qiyaasood oo isku mid ah toddobaadkii si wadajir ah wadarta qiyaasta toddobaadlaha ah. Qaadashadu waxay ka badan kartaa 500mg toddobaadkii; Si kastaba ha noqotee, rag badan ayaa ka heli doona xadka 500mg si ay u noqdaan wax walba oo ay u baahan yihiin. Haddii dheeraad ah la rabo, ragga badani waxay heli doonaan 600-1,000mg usbuuc kasta si loo dulqaato oo loo xakameeyo, laakiin qiyaasaha xariirka ee 1,000mg ayaa si weyn u kordhin doona suurtagalnimada saameynta xun. Imisa tijaabo oo ah nin ayaa u dulqaadan kara lana xakameyn karaa hal qof ilaa kan xiga. Si kastaba ha noqotee, ragga intooda badani waxay helayaan qiyaaso ka sarreeya 1,000mg toddobaadkii oo dhan, laakiin waxay damaanad qaadayaan saameynaha heerarka qaarkood.
Iyadoo aan loo eegin ujeedadaada isticmaalka, Testosterone Enanthate waxay si fiican u qabataa dhammaan stabiyada anabolic. Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, ma jirto sabab loo xareeyo testosterone kale. Tani waxay noqon kartaa mid aan macquul ahayn inta badan kiisaska. Si fudud u dooro steroids kale oo dabooli kara ujeedada la rabay ee isticmaalka ugu fiican.
Imtixaanka Baaritaanka Enantea:
Testosterone Enanthate waa steroid aad u fudud, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah steroids ee ugu weyn ee waqtiga oo dhan. Waa mid aad u awood badan oo ku siman heer aad u sarreeya oo dulqaad ah inta badan dadka waaweyn. Sida wakiilka daweynta, isticmaalka Testosterone Enanthate waxay si wayn u beddeli kartaa noloshaada. Way ka badan tahay suurtogalnimada nin dhexdhexaad ah inuu dareemo sida uu mar kale u yahay mar kale. Ma aha oo kaliya inuu riyadiisa iyo qiiro u noqdo nolosha soo noqoshada, wuxuu noqon doonaa mid caafimaad leh.
In karti waxqabad, halka qaar badani ay ku dhejin doonaan steroids kale oo ay la socdaan Testosterone Enanthate waxay u isticmaali kartaa keligaa. Tani waa aasaaska aasaasiga ah ee anabolic anabolic taas oo kor u qaadi karta isbeddellada xag jirka ah ee jirka oo dhan isaga qudhiisa. Inkastoo ay qaadanayso qiyaasta suurtogalka ah si loo helo isbedel dhab ah oo la fahmi karo, waxaan uga mahadcelineynaa marxaladaha khalkhalka xun wali aad u sarreeya. Sidoo kale muhiimad weyn, marka si aad ah waxtar u leh qiimaha steroidkaan waa mid ka badan intii la awoodi karo taasoo siineysa rafcaan ka badan tan hore u lahayd. Iyadoo aan loo eegin heerkaaga waayo-aragnimada aadan kudeli karin Testosterone Enanthate.
Halkee u iibso Testosterone Enanthate budada internetka?
Waxaad ka heli kartaa barta intarnetka ah ee Trenbolone Acetate intarneedka, laakiin way adagtahay inaad ka iibsato budada Genuine Trenbolone Acetate online. Waxaa jira ilo badan oo iibiya alaabta been abuurka ah ee suuqa. marka marka aad iibsato budada Trenbolone Acetate online, waxaad u baahan tahay inaad doorato a ilo sugan.
Faa'iidooyinka iibso Testosterone Enanthate budada AASraw:
1. Isticmaalidda steroid tayada fiican leh oo leh qiimaha warshad hooseeya
Waxaan dammaanad qaadnaa nadiifinta ugu sareysa ee dhammaan budada ah> 98%, sababtoo ah waxaan nahay kuwa soo-saaraha aan iibin, dhammaan alaabta halkan waxaa lagu iibiyaa si toos ah qiimaha ugu hooseeya.
2. Dheecaan iyo badbaado siinta walxo cayriin ah
1) Qashinka waxaa loo diri karaa saacadaha 24 ka dib bixinta, ka dibna bixinta lambarka raadinta.
2) Kalluumeysatada qibrada leh waxay ku kalsoon tahay hubinta iyo sirta khudradda dhammaan qalabka ceeriin ee steroid. Hababka kala duwan ee gaadiidka, iyo dooro midka ugu fiican sida adreeskaaga shakhsi ahaaneed.
3) Heerka ugu sareeya ee gaarsiinta gaarsiinta waa ka sarreeyaa 95%.
4) Waqtiga la bixinta ee loogu talagalay budada steroids: 3-5 maalmaha shaqada ee USA, iyo 4-6 maalmaha shaqada ee wadamada Midowga Yurub.
3. Waxaan haynaa macaamiisha adduunka oo idil
1) Adeega xirfad leh iyo khibrad hodan ah waxay macaamiishu dareemaan dareenkooda, suuq ku filan dhammaan noocyada walxaha steroid iyo bixinta dhakhso ah waxay la kulmaan rabitaankooda.
2) Soo celinta jawaabta qofka, waa la soo dhaweynayaa, talooyinkaagu waxay naga qaadayaan inaan kor u qaadno adeeggayaga, waana mas'uuliyaddayada inaan la kulmo dhamaan shuruudaha macaamiisha.
3) AASraw waa mid ka mid ah kuwa ugu kalsoon ee alaabooyinka ceeriin ee steroid ah oo leh alaabta tayada ugu fiican, maraakiibta amniga & si deg deg ah leh adeeg fiican.
Tags: testosterone enanthate budada
Ronald J Rapacciuolo10 / 23 / 2018 at 12: 33 pm
Rabitaanka 100 Grams ee imtixaanka E iyo 100 ee Deca waxay u baahan tahay in ay ogaato qiimaha iyo macluumaadka ku saabsan inay diraan lacag naxwe ah. Ama amarka lacagta.
John Kramer10 / 22 / 2018 at 9: 11 pm
Waxay xiiseyneysaa iibsashada qaar ka mid ah imtixaanka E, imtixaanka C iyo qaar ka mid ah Deca. Waxaan maqlay in aad adigu tahay ammaan iyo sharci. Fadlan ii soo celi.
Jeremy butler10 / 22 / 2018 at 4: 29 pm
Ma dooneysaa inaad iibsato budada 100 grams. Cusbooneysiin cusub. Sida shaqaaleyga ayaa ii sheegay arrintan.
Dave09 / 14 / 2018 at 7: 36 pm
Intee in le'eg ee imtixaanka 500mg E budada iyo sideen u iibsanayaa
Dr. Patrick Young09 / 02 / 2018 at 8: 59 pm
OK, waanu kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Christopher09 / 01 / 2018 at 5: 37 pm
Rabitaanka 100 grams ee imtixaanka E iyo 100 ee Deca waxay u baahan tahay in ay ogaato qiimaha iyo macluumaadka ku saabsan inay u diraan naxaas lacag
Dr. Patrick Young08 / 01 / 2018 at 9: 56 pm
OK, waxaan kula soo xiriiri doonaa adiga
Robert Buchel08 / 01 / 2018 at 2: 13 pm
Iska jira. Intee in le'eg ayay ISTICMAALKA 100 ee Testosterone Enanthate igu kacday? Maxay tahay qiimaha maraakiibta ee Netherlands?
Dr. Patrick Young07 / 10 / 2018 at 8: 50 pm
OK, waxaan la xiriiri doonaa boostadaada.
Haitham A07 / 10 / 2018 at 12: 53 pm
Maxay noqon laheyd qiimaha iibka ee 25 Grams of Enanthate, oo loo dhiibay Ontario, Canada
Edward Corlett06 / 24 / 2018 at 5: 55 pm
Ma heli karaa arrintan Kanada
Homer Simpson04 / 05 / 2018 at 8: 14 pm
Ma u baahanahay baaritaan qaar ah e. Gobolka Washton miyaad halkan ka heli kartaa?
Tilmaamaha Hore ee Tijaabada ah ee Testosterone	Iibso methenolone Enanthate budada: ha u iibsan ka hor intaadan ogeyn kuwan !!!